MMEMME MAKA IṄOMI FAỊLỤ - ỊHỌRỌ USORO IHE OMUME - 2019
Mmemme maka iṅomi faịlụ
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta diski multiboot ma ọ bụ windo, ị chọrọ usoro XBoot. Na ya, ị nwere ike ide ihe ngosi nke sistemụ arụmọrụ ma ọ bụ ọrụ dị na mgbasa ozi nchekwa.
Ịmepụta windo ngwa ngwa ma ọ bụ CD
Akụkụ bụ isi nke usoro ihe omume ahụ bụ ịmepụta ọkpụkpọ na-ewepu ọtụtụ ihe. Ka ịghara iji ụzọ mgbaba ma ọ bụ diski ma ọ bụ disk ebe a ga-edekọ ya, XBoot gosipụtara ọnụ ọgụgụ zuru oke nke ihe oyiyi niile a gbakwunyere.
Usoro ihe omume ahụ na-amata ọtụtụ nkesa, mana ọ bụghị mgbe niile ka ị chọpụta ihe oyiyi ị na-agbakwunye. Mgbe ahụ, ọ ga-eme ka gị na ihe mmemme ma ọ bụ ọrụ ị na-agbakwụnye kọwaa.
Maka mmemme ahụ iji rụọ ọrụ nke ọma, ịkwesịrị NET Framework ọbụlagodi mbipute 4.
Dịka na ihe omume niile yiri nke a, ị nwere ike ịnwale ụlọ gị na QEMU kwalite asụsụ igwe na-arụ n'ime IxBut. Ụzọ a na-eme ka o kwe omume ịchọpụta otú ọ ga-esi lee anya n'ozuzu ma n'otu oge ahụ chọpụta ọrụ nke ụlọ ọrụ arụnyere.
Ọ bụrụ na ibudataghị ihe oyiyi nke usoro eji arụ ọrụ ma ọ bụ ihe ndị dị mkpa, XBoot na-enye gị ohere ibudata ụfọdụ n'ime isi mmalite nke isi mmalite site na usoro mmemme ahụ.
Na-agụta ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke ihe oyiyi e dekọrọ;
Nbudata ụfọdụ nkesa site na Ịntanetị site na interface XBoot.
XBoot bụ usoro dị ike maka ịmepụta na ịmepụta bọtịnụ multiboot. Ọhụụ ntakiri na nke a na-ejighị n'aka na-enye onye ọ bụla ohere ịmepụta bọtịnụ disk ma ọ bụ USB-drive.
Download XBoot n'efu
SARDU Ngwuputa Uzo nke uwa WinSetupFromUSB Butler
XBoot bụ ngwá ọrụ dị ike na nke enweghị onwe ya maka ịmepụta bọtịnụ multiboot, nke ga-abịa napụta ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịdegharịa os ma ọ bụ chọpụta nje.
Onye Mmepụta: shamurshamur